Nin Oromo Ah Oo Gabar Soomaaliyeed Xalay Ku Dilay Xaafadda Islii Ee Nairobi |
Nin Oromo Ah Oo Gabar Soomaaliyeed Xalay Ku Dilay Xaafadda Islii Ee Nairobi
Nairobi (GNN) Xaafadda Eastleigh (Islii) ee magaalada Nairobi, ayaa xalay waxaa ka dhacay dil naxdin leh kaddib markii nin Oromo ah oo u dhashay wadanka Itoobiya uu Tooreey ku dilay Gabar Soomaaliyeed.
Falkaan dilka ah oo dhacay abaaro 11-kii Xalay, ayaa ka dhacay agagaarka wadada Juja ee xaafada Islii, waxaana wararku ay intaas ku darayaan in Gabadha la dilay oo magaceeda lagu sheegay Saado ay u dhimatay dhow Tooreey oo uu ku dhuftay ninkaas oo markii dambe isaguna isku dilay Sun uu cabay.
Goob joogayaal ka ag’dhawaa halka uu falkaas ka dhacay, ayaa sheegay xalay inta uusan dilkaas dhicin ka hor in Marxuumada la dilay ay ka soo baxday gurigooda oo halkaas ku
yaallo, isla markaasna ay dhaweysay gabar ay saaxiibo ahaayeen balse markii ay damacday iney dib ugu noqoto gurigooda uu ninkaas wadada u galay.
Wararka qaar ayaa sheegaayo in ninka dilka geystay oo magaciisa lagu sheegay Cabdimaalik, uu markii hore gabadhaas u soo bandhigay jaceyl, uuna u sheegay inuu guur ka rabo. Balse ay ka diiday; taasina ay sababtay inuu dilo.
Goob-joogayaal ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in marar kala duwan toorey gabadhan lagu dhuftay oo dadka deegaanku ay damceen inay ula cararaan goob caafimaad, laakin geeriyootay ka hor inta aanan Isbitaalka la geynin.
Goob joogayaasha oo codsaday in aanan magacooda la shaacinin, ayaa sheegay in Marxuumadaas ay la nooleyd Qoyskooda oo halkaas dagan halkaas wiilka dilayna la sheegay in uu daganaa meel anaan ka fogeyn xaafadooda.
Dhanka kale, ciidamada Booliska Kenya oo isla xalay tagay goobta uu falkaas ka dhacay, ayaa qaadeen Meydka ninkii is dilay si ay baaritaano ugu sameeyaan sababta dilalkaan, halka Marxuumadii la dilayna maanta lagu wado in lagu xabaalo qabuuro ku yaallo magaalada Nairobi.
Ugu dambeyn, Xaafadda Islii oo ka tirsan degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, ayaa waxaa kuwada nool dad badan oo Soomaali iyo Oromo iskugu jiro. Kuwaasoo qaarkood ay wada dagan yihiin guryo Dabaqyo ah oo halkaas ku yaallo ayna ku leeyihiin xaafadaas ganacsyo kala duwan.